Kuuriyada Waqooyi oo mamnuucday in dadka u dhashay Malayshiya ay ka baxaan dalkeeda - Worldnews.com
Wakaaladda wararka ee KCNA ayaa sheegtay in xayiraadan socdaalku ay taagnaan doonto inta si wanaagsan looga
Booliiska Malayshiya ayaa sii daayay ninkii kali ahaa ee Kuuriyada Waqooyi u dhashay ee loo hayay dilka Kim Jong-nam. Saraakiishu waxay sheegeen in la waayay cadday ku...
Kiimikadii loo adeegsaday dilka ninka ay isku aabaha yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa la ogaaday in ay ahayd kiimiko neerfayaasha wax yeesha, sida uu sheegay...
Waxaa la soo gabogabeeyay baaritaanka maydka Kim Jong-nam oo ay walaalo yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Kim ayaa dhintay Isniintii isaga oo loo malaynayo...
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooti Kim Jong-Un ayaa booqday warshad soo saarta daawooyiinka la isku qurxiyo oo ku taalla Pyongyang. Waxaa booqashada ku wehliyay xaaskiisa oo aan badanaa la arkin oo lagu magacaabo Ri Sol-ju iyo walaashiisa Kim Yo-jong. Warbaahinta dowladda ayaa Axaddii baahisay sawirro muujinaya Kim Jong-un oo booqanaya warshadda. Labadan dumar ee la socday aad ayey...
Laba dumar ah oo looga shakisan yahay dilka Kim Jong-nam, oo isku aabo ay yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi Kim Jong-un, ayaa lagu oogayaa dacwad ah "dil bareer ah". Labadaasi haween ayaa maxkamad la geyndoonaa Arbacada, sida ay sheegayaan dacwad oogayaasha. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Malaysia Janaraal Maxamed Apandi Cali wuxuu sheegay in labadan qof oo ka soo kala jeeda...